बैङ्क / वित्त
काठमाडौँ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) सँग ठगीमा संलग्नलाई पक्राउन गर्न सहयोग मागेको छ । नेपालमा प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको गुनासोका आधारमा विभागले अध्ययन गर्दै ठगीमा व्यक्तिलाई पकाउ गर्न सहयोग मागेको हो । विभागले
आर्थिक प्राथमिकताहरुको पुनर्विन्यास तथा स्रोतसाधनको पुनःनिर्धारणमा विलम्ब नगरौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधारभूत स्वास्थ्य रक्षाका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जारी राख्न राष्ट्रहरुले आर्थिक प्राथमिकताहरुको पुनर्विन्यास तथा स्रोतसाधनको पुनःनिर्धारण अविलम्ब गर्नुपर्ने औँल्याउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभाका अवसरमा राष्ट्रसङ्घीय विकास
काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट रू. १६ अर्ब ४२ करोड
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रू. १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले सो रकम बराबरको बजेट बुधबार नगरसभाको सातौं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेकी हुन्। बजेटमा आर्थिक
लकडाउन पूर्ण खुलेको एक महिना भित्र कर तिर्नुःसर्वोच्च
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन
१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाँको बजेट सार्वजनिक
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा विनियोजित बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालू अर्थात् सामान्य खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन
होटल तथा रिसोर्टलाई क्वारेन्टाइन बनाउने सरकारको तयारी
जेठ ९, काठमाडौं । विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई राख्न आवश्यक क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि होटल तथा रिसोर्ट प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा बिहीवार भएको छलफलमा राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले देशभरका व्यवस्थितरूपमा चलेका होटल तथा रिसोर्टलाई क्वारेन्टाइन बनाउनेबारे आवश्यक परामर्श
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)
काठमाडौं । लकडाउनको बेला बढी मूल्यमा खाद्यान्न, मासु तथा फलफूल बिक्री वितरण गर्ने चार पसललाई कारबाही गरिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले बजार अनुगमनका क्रममा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर १ इमाडोलस्थित कटुवाल स्टोर्सलाई रु दुई लाख जरिवाना गरेको छ । आयोडिन
५० ग्यास उद्योगको अनुमति खारेजी
काठमाडौं, नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएर सञ्चालनमा नआएका ५० उद्योगको अनुमति खारेज गरेको छ । ग्यास उद्योग निर्माण गरी सञ्चालन गर्न अनुमति लिने तर उद्योग निर्माण नगर्ने, अनुमतिपत्र खरिद बिक्री गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निगमले ती उद्योगको अनुमति खारेज गरेको हो । उद्योग विभागमा
लकडाउन अवधिमा २ अर्बको दूध नोक्सान
वैशाख २, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन अवधिमा करीब रू. दुई अर्बको दूध नोक्सान भएको छ । नेपाल डेरी एशोेसिएशनले लकडाउनको २१ दिनका अवधिमा रू. पाँच अर्बको सामान मौज्दात रहेको जानकारी दिएको छ । एशोसिएशनका महासचिव प्रल्हाद दाहालका अनुसार दूध र दुग्धजन्य वस्तुको
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । स्वभावैले विदेशी यात्रुको आवतजावत हुने अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने उडानले कोरोना भाइरसको सन्त्रासलाई थप बढावा दिने गर्दछ । के अन्तरराष्ट्रिय उडान रोक्दैमा कोरोनाको सम्भावित जोखिम नियन्त्रण हुन्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन किनकी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश मात्र हैन, विकसित
डा.खतिवडा हिजो राजीनामा, आज मन्त्री
काठमाडौं । डा.युवराज खतिवडा पुनःअर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् । मंगलबार सांसदको पदावधि सकिएर राजीनामा दिएका खतिवडालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१०) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालको उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी चैतमा हुने निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै अहिले व्यवसायीबीच चुनावी महोल तात्न थालेको छ । जसका लागि व्यवसायीले आआफ्ना पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् । महासंघको आगामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष एवं व्यवसायी चन्द्रप्रसाद
बैंकमा पैसा देखाउने नाममा ठगीःअमेरिका र अष्ट्रेलिया जाँदा बैंक ब्यालेन्स देखाउने बाँध्यता
काठमाडौं, फागुन ७ गते । पैसा हुने वित्तिकै घर जग्गामा लगानी गरेकाहरुको पछिल्लो समयको आकर्षण भएको छ अमेरिका र अष्ट्रेलियासँगै युरोपेली देशहरुमा जानेहरुको बैक ब्यालेन्स ‘सो’ गरिदिने । निश्चित रकम कमिशन लिएर पैसा देखाइदिए वापतको रकमबाटै राम्रो कमाइ हुने भएकाले राजधानीमा यस्तो व्यवसाय फष्टाउँदै गएको
नेपाल वितरक संघको १९औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न : अध्यक्षमा राजेन्द्र सिम्खडा
पारु तिवारी, काठमाडौँ । नेपाल वितरक संघले आफनो १९औं वार्षिक साधारणसभा भव्यरुपमा सम्पन्न गरेको छ । शनिवार काठमाडौँमा सम्पन्न साधारणसभाले सर्वसम्मत रुपमा राजेन्द्र सिम्खडाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो । चयन भएका नया कार्यसमितीका अन्य पदाधिकारीहरुमा लव कुमार श्रेष्ठ प्रथम उपाध्यक्ष,
नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तार गरिँदै, १६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान
फागुन २, काठमाडौं । नागढुङ्गादेखि मुग्लिनसम्मको ९४ दशमलव ७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ । हाल एकदेखि दुई लेन चौडाइ रहेको सडकलाई चारदेखि छलेनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो । सडकमा साँघुरा मोड रहेकाले त्यसलाई समेत सुधार गरिने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । मोड सुधार गर्दा सडकको लम्बाई नै केही घट्न
पेट्रोल अन्वेषण: सर्वेको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न
दैलेख, माघ २७ गते । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले ‘कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ र कुन स्थानमा बढी भण्डारणको सम्भावना छ’ भनेर जमिनभित्रको अवस्था पत्ता लगाउने महत्वपूर्ण भौगर्भिक (सेस्मिक) सर्भेको काम जारी रहेको छ । सर्भेको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको
चितवन, २६ माघ - नारायणी नदीमा आगामी फागुन महिनादेखि क्रुजसीप (सानो पानीजहाज)सञ्चालनमा आउने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा क्रुजसीप निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पानी जहाजसम्बन्धी उद्योग दर्ता गर्न पाउने निर्णय गरेसँगै यहाँ जहाज निर्माण शुरुआत भएको थियो । क्रुजसीप निर्माण गर्दै
वीरगञ्ज, माघ १३ गते । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय वीरगञ्जले धान खरिद गर्न बन्द गरेपछि किसान निराश भएका छन् । कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी माघ १० गतेदेखि धान खरिद गर्न बन्द गरेपछि धान बेच्न आउने किसान निराश भई घर फर्किन बाध्य भएका हुन् । एकाबिहानै
मेलम्चीकाे सुरुङ चारसय मिटर मात्र ‘फिनिसिङ’ हुन बाँकी
काठमाडौँ, पुस २८ गते । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सुरुङ ‘फिनिसिङ’को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले झण्डै ४०० मिटरमा मात्रै अन्तिम काम (फाइनल फिनिसिङ) बाँकी रहेको छ । चार महिना पहिले चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम शुरु गरेसँगै तीव्रगतिमा काम अघि बढेको छ । इटालियाली निर्माण कम्पनी सिएमसीले
४५ मेवा क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशीबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु
पुस ६, चौतारा । ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट आयतवारदेखि व्यापारिक उत्पादन शुरु भएको छ । दुई साताको परीक्षण प्रसारणपछि लामोसाँघुको सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गरी व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले बताए
ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकको एकीकृत कारोबार शुरू,मर्जरमा नगए पछुताउने समय नपाइने अर्थमन्त्रीको भनाइ
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक मर्ज भएर शुक्रबारबाट एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एकीकृत कारोबारको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ठूला परियोजनामा दीर्घकालीन र मध्यकालीन लगानी गर्न ठूलो आकारको बैंक आवश्यक भएको
वार्षिक सवा दुई अर्ब खर्च नियन्त्रण गर्ने नेवानिको घोषणा
काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगमले वार्षिक सवा दुई अर्ब खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ । निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले निगममा आन्तरिक सुधारमार्फत खर्च कटौंतीको घोषणा गरेका हुन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले इन्धन, ओभर फ्लाइट, होटल अकमोडेसन, इन्जिनियरिङ लगायत क्षेत्रमा सुधार गरेर यसै आर्थिक वर्षको
प्रधानमन्त्रीले गरे नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरूङमार्गको शिलान्यास,४२ महिनामा काम सक्ने लक्ष्य
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरूङमार्गको शिलान्यास गरेका छन्। सोमबार चन्द्रागिरी नगरपालिका–१ टोटीटोलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरूङमार्गको शिलान्यास गरेका हुन्। धादिङको सिस्नेखोलाबाट सुरू हुने सुरूङमार्ग टोटीटोलमा आइपुग्छ। जापान सरकारको
१७ देशका बाख्रा विज्ञको सम्मेलन चितवनमा
चितवन । बाख्रा विज्ञहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि चितवनको रामपुरमा शुरू हुँदैछ । बाख्रापालनलाई व्यवसायीकरण र उत्पादनमा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन गर्न लागिएको हो । कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, रामपुरको परिषरमा अमेरिका क्यानडा, जापान, ईटाली, पाकिस्तान, भारत लगायत १७ देशका ११७ देशले कार्यपत्र
एनआरएनएलाई नेपालमा लगानी गर्न राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्तिगत तथा सामूहिक लगानी समग्र नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियान लगाउन सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आह्वान गरेकी हुन्। मंगलबारबार काठमाडौंमा शुरु भएको संघको नवौं अधिवेशनको
काठमाडौँ, १७ असोज - नेपाल टेलिकमले फोरजी एलटिइ सेवालाई विस्तार गर्दै ३७ जिल्लामा पुर्याएको छ । काठमाडौँ र पोखरामा २०७३ पुस १७ गतेदेखि सो सेवा शुरु गरेको टेलिकमले बुधबारमात्र विभिन्न ३२ जिल्लाका ५० बढी शहरमा फोरजी सेवा उपलब्ध गराएको थियो । बिहिबार थप पाँच जिल्लाका ६० शहरमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको
नेपाल चिया संघका पदाधिकारीले लिए सपथ,चिया प्रवर्द्धनमा एकजुट हुने प्रतिवद्धता
काठमाडौं । नेपाल चिया संघका पदाधिकारीहरूले आधिकारिक सपथ लिएका छन् । बुधबार निर्वाचन कमिटीका प्रमुख केदार कार्कीले निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्रसहित सपथ गराएका हुन् । गत भाद्र २६ गते भएको संघको प्रथम महाधिवेशनले पदाधिकारीसहित १५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिती चयन गरेको थियो । निर्वाचित पदधिकारीमा
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा लोकतान्त्रिक समूह विजयी,कसले कति मत पाए ?
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा विष्णुप्रसाद पौडेलको प्यान विजयी भएको छ । संघको २७ औं वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक प्यानलका उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । अध्यक्षमा बिष्णु प्रसाद गैरेले ३ सय ३० मत ल्याई अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी सरोजकुमार पोखरेललाई ४७ मतले पराजित गर्दै
कुल पोष्ट : 157